August 2018 – HlaMin
By Hla Min (Lifelong Learner) on August 3, 2018 • ( Leaveacomment )
Dhatu Kyaw Linn Ko Richard (Dhatu Kyaw Linn, ChE75) volunteered as an official photographer at SPZP-2000 and at the events hosted by NorCal RITAA. Summer Picnic Photos The following photos were taken at the NorCal RITAA Summer Picnic held at Coyote Point Recreation Area on July 29, 2018.
Hmaw Sayagyi U Wynn Htain Oo (M72) wrote : ပီတိပွား​စေရန်​လွန်​ခဲ့​သောတနှစ်​တိတိကကြိုးပမ်း​ပေးခဲ့ရပုံ​တွေကိုပြန်​လည်​တင်​​ပေးလိုက်​ရတယ်​ အားလုံးကြိုးပမ်းကြရင်​ဒီလိုဘဲတဆင့်​ပြီးတဆင့်​တိုးတက်​လာမယ်​ယုံကြည်​ပါတယ်​ မလုပ်​ဘဲထိုင်​​နေရင်​​တော့ဒုံရင်းဘဲရှိ​နေမယ်​ ​ကျောင်းတော်ကြီးစာကြည့်တိုက်အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအပိုင်းမှာ..တဆင့်တော့အောင်မြင်ပါပြီ.. စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးဖို့ဆိုတာ..စာကြည့်တိုက်စီမံကိန်းမှာအရေးအကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတရပ်ဖြစ်ပါတယ်..ခေတ်မီစာကြည့်တိုက်လုပ်ဆောင်ပု့ဌာါ်ရမ်းပုံ..နေ၇ာထားရှိပုံတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေကသိမှ..တည်ဆောက်သူတွေကိုလိုတာအကြံပေးနိုင်မယ်..စာကြည့်ချင်စိတ်တွေပွားများအောင်လုပ်နိုင်ပါ့မယ် ဒါပေမဲ့အလမ်နိုင်ျမှာ..ငွေမရှိပါဘူး..အဆောက်အဦးအတွက်တောင်ဘယ်ကရှာရမှန်းမသိသေးချိန်မှာ..ယိုးဒယားက..chemical72သူငယ်ချင်းအောင်မြိုင်က..မင်းတို့ဝန်ထမ်းတွေရောနိုင်ငံခြားလွှတ်သင်တန်းမပေးဘူးလားလို့မေးပါတယ် ကျနော်က..လွှတ်ချင်တာပေါ့ကွာ..ငွေမှမရှိတာဆိုတော့..သူငယ်ချင်းကချက်ချင်းဘဲNorCalRITAA(ကာလီဖိုးနီယားမြောက်ပိုင်းအာအိုင်တီကျောင်းသူကျောင်းသားများအဖွဲ့ကဆရာဦးမောင်မောင်ဆီစာရေးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်..ဆရာဦးမောင်မောင်..ကိုကောင်းတို့အားလုံးလက်ညီတက်ညီလုပ်တာ..ဒီနေ့ဘဲဒေါ်လာ၃၀၀၀ရပါပြီ..ဒီမှာလဲကျနော်က..ကိုတင်ဦး(စက်မှု၈၇)ကိုအလှုခံတော့..ဒေါ်လာ၅၀၀..ကိုအောင်မင်း(၇၃ရေနံ)ကငါးသိန်း.ကိုဂျိမ်း​ရွှေ:၊၇၆စက်​မှုက၆သိန်း၎​သောင်း .အခုဆိုသူတို့..နေ့တွက်စရိတ်ပေးဖို့လောက်ပြီ..စာကြည်ပတိုက်အစည်းအဝေးမှာ..လေယဉ်စရိတ်ရှာရမယ်တင်ပြတော့ကိုမျိုးမြင့်(၈၅မြို့ပြ)ကသူလှုမယ်…တခါ..စင်ကာပူကိုလေ့လာရေးလွှတ်မယ်ပြောတော့(၂၀၀၃စက်မှု)ကိုမျိုးသွင်က..နေစရာသူတာဝန်ယူပါမယ်(သူကတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတာတောင်..ကျနော့်မှာသေချာအောင်..ကိုမျိုးသွင်တာဝန်ယူမှာဖရီး..နော်လို့မေးရသေးတယ်..သူကဟုတ်ပါတယ်ဦး…ဖရီးပါပြောရှာပါတယ်) အခုဆိုအချက်အလက်တွေပြည့်စုံပြီမို့ရွေးချယ်တာတွေဆက်ဆောင်ရွက်မှာတွေကျောင်းတော်ကြီးကိုဆက်လက်လွှဲပါတော့မယ် ဒီဇတ်လမ်းကိုစစေတဲ့သူငယ်ချင်းအောင်မြိုင်..ဆရာဦးမောင်မောင်..ကိုကောင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကာလီဖိုးနီးယားကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ..ကိုတင်ဦး..ကိုအောင်မင်း.ကိုဂျိမ်း​ရွှေ .ကိုမျိုးမြင့်နဲ့ကိုမျိုးသွင်တို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အိမ်မက်တခုအကောင်အထည်ပေါ်လာလို့ပါ..ထုံးစံအတိုင်းWHOအခန်းကတော့အီးမေလ်လေးရေးလိုက်..အခါအခွင်ကြုံရင်တင်ပြီးအလှုရှင်လေးရှာလိုက်နဲ့..ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးဘဲလုပ်ရတာပါ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပင်တိုင်စုစည်းပေးခဲလို့ဒီအခြေအနေေ၇ာက်ခဲ့တာကိုတော့အမှန်ပင်အရမ်းအရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်..သွားရမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့တကယ်လေ့လာခဲ့ကြပါလို့တော့အသေအချာမေတ္တာရပ်ခံရပေအုန်းမယ် Editor’s Notes : Since this post was published several months back, there have been tremendous progress for the YTU Modernization Project. Groups and individuals have donated and/or […]